Eoropa : Mampahery Ny Rosiana Ny Fandresen’ny Hery Ankavanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2014 12:30 GMT
Marine Le Pen, mpanao politika frantsay ‘mamoky’ fanantenana ireo Rosiana maro fa tsy irery izy amin'ny fisarahana amin'ny Firaisam-be Eoropeana. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Raha mbola henjana noho ny tamin'ny roapolo taona lasa ny fifandraisana eo amin'ny Rosia sy Eoropa, dia tamim-pahalinana no nanaraan'ny Rosiana ny fandresen'ireo antoko avy amin'ny hery farany ankavanana ao amin'ny Parlemanta eoropeana tamin'ilay fifidianana vao haingana teo. Raha toa ka mampitaintaina ny sasany ao amin'ny firaisambe Eoropeana io fiovana io, betsaka ny Rosiana no nandray izany samboaravoara ao amin'ny fisarahan'ny Eoropeana izany ho toy ny fanamarinana ny fihetsika manohitra ny Firaisambe Eoropeana ataon'i Maosko.
Nanoratra tao amin'ny Facebook ilay mpitoraka bilaogy sady mpanao gazety mpomba an'i Kremlin, Maxim Kononenko, ny ampitson'ny fifidianana nanerana an'i Eoropa sy Okraina :
венные ценности, которыми они не хотят поступаться неизвестно ради чего. И процент, получаемый партиями евроскептиков от года к году неизменно растет. То есть, Украина голосует за интеграцию с Европой, а Европа в тот же день голосует за собственную дезинтеграцию. И не знаю, как вам, а лично мне кажется, что это движения в несколько разных направлениях.
Marina fa mahafinaritra ny maha-olona ny olona maneran-tany. Nefa mialoha ny zava-drehetra dia misy ny maha-izaho ahy izay tsy azo atao sorona amin-javatra tsy azo antoka. Mitombo isan-taona ny isa azon'ireo mpisintaka amin'ny faritra Euro. Midika izany fa nifidy ny fiarahana amin'i Eoropa i Okraina, raha i Eoropa kosa nifidy ny fisamantsamahany tamin'io andro io ihany. Tsy fantatro izay momba anao, fa ho ahy manokana dia ohatra ny làlana roa mifanipaka izany.
Nahasarika fisainan'olona maro tao amin'ny aterineto Rosiana ilay mpanao politika Frantsay Marine Le Pen tamin'ny Martsa 2014, rehefa nanaiky ny vokatry ny fitsapan-kevi-bahoaka fisarahana tany Krimea. Nanaparitaka fanentanana “Merci Marine!” (misaotra Marine) tao amin'ny Twitter ilay mpitoraka bilaogy madinika Konstantin Rykov, ary nanentana ireo mpanara-dia azy mba hisaotra an'i Le Pen, ora vitsy taorian'ny fanambaràny. Araka ny voalazan'ny vavahadin-tserasera any Kharkov dia Rosiana an'arivony no nanohana tamim-pahavitrihana ny fandraisana andraikitr'i Rykov ka nanototra fisaorana ny Twitter-n'i Le Pen. Nanomboka tamin'izay dia mamim-bahoaka teo anivon'ireo mpitoraka bilaogy Rosiana ny mpitarika ny ‘Front National’ Frantsay. Noho izany dia nosokafan'i Rykov ny kaonty Twitter manokana izay handefasany ireo fanavaozam-baovao momba ny fanehoan-kevitra ho an'ny daholobe ataon’i Le Pen ho fombàny an'i Rosia. Ireo Rosiana sasany mpisera amin'ny Twitter dia faly amin'ny fandikana ny teniny momba ny zon'ny ” vahoaka lehibe Rosiana ” mba hitadiavana ny ” firaisana indray”. Fandikana iray ( jereo etsy ambany) tamin'ny 26 May 2014, ohatra, dia nahasarika bitsika efa ho 300. .
Ambaran'i Marine Le Pen fa nifidy ny hitsipahana ny Firaisambe Eoropeana ny frantsay. [ Vakio amin'ny sary, ” Tokony hanaiky ny zo amin'ny fampiraisana vahoaka lehibe Rosiana isika. Samy miaina any Rosia sy manamorona ny sisiny havian'i Dnieper izy ireo.”]
Na eo aza ny fientanentanan-dry zareo Rosiana amin'ny ankapobeny, vitsivitsy ireo izay mahaporofo ny fahafehezany tanteraka ny tena fandaharanasan'ireo mpanao politika avy amin'ny hery farany havanana Eoropeana. Ezahan'ireo haino aman-jery rosiana hamaivanina ny resaka toy ny fankahalana Silamo sy ny fanavakavahana Jiosy, ary ny maro hafa. Ohatra ny hoe maro ireo mpanao gazety am-bava manam-pahaizana no milaza tsotra izao fa tia tanindrazana, miaro ny fiandrianam-pirenena ireo hery ankavanana Eoropeana raha tokony hanapotsitra ireo pitsopitsony izay mampananosarotra ny sarin'ny ” mpitahiry ny maha-Eoropeana mpomba an'i Rosia”. Niseho tao amin'ny “British Independence Day” ( Fetin'ny Fahaleovantena Anglisy) sy ny “The Liberation of a ‘Europe of Nations’” ( Ny fanafahana ny Eoropa iray iraisan'ny fanjakàna) ireo lahatsoratra fanehoan-kevitra
Amin'ny fandrakofana tahaka izany dia tsy mahalàna no ahitana, eo anivon'ny Rosiana, fanantenana fa mizotra amin'ny làlana tsara amin'ny fampiraisana ireo antoko ankavanana Eoropeana ho vovonana iray izay hiketrika fanavaozana goavana ao amin'ny Firaisam-be Eoropeana. Na ho azo tanterahana tsara na tsia izany soso-kevitra izany, efa vonona ny handray ny fiovana tahaka izany ny fiarahamonim-pirenena Rosiana.
Mety ho marina ihany koa angamba fa ity taona ity no voalohany nanamarika eo amin'ny tantara fa narahan'ny Rosiana tamim-pahalinana ny fifidianana Parlemanta Eoropeana, ny fifidianana Parlemantera Eoropeana. Ohatra kely fotsiny, nanjary nalaza vetivety monja i Tutuskania , mpitoraka bilaogy Rosiana ao amin'ny LiveJournal monina any Paris tamin'ny andron'ny fifidianana rehefa nandefa tatitra an-tsary ahitàna ireo mpikatroka mafàna fo avy amin'ny Femen miezaka ny “manao faneniftry” ny “fascism” (jadona) ataon'i Le Pen.
Talohan'ny fahatongavan'i [Le Pen], teo akaikin'ny sekoly iray natao ho birao fandatsaham-bato, nisy mpikatroka Femen nitafy tapaka nitondra fanjaitra fanindronana nandrisika ny mpifidy hatao vaksiny amin'ny fanavakavahana. Rehefa tonga handatsa-bato i Marine dia efa tsy teo intsony ry zareo. Nihazakazahan'ny mpanao gazety ny nanadihady azy mba hahalalan'izy ireo na hitany na tsia ireo olona ireo. “Tsy hitako izany, tsara vintana ianareo [nahita azy ireo]”, hoy ny fomba fialan'i Marine.
Ho famaranana ny lahatsorany dia nanontany ny mpisera ao amin'ny LJ i Tutuskania :
Raha toa ka mahaliana anareo, dia azoko tantaraina anareo amin'ny antsipirihany ny hatairan'ny Eoropa sy Frantsa tamin'ny fandresen'i [Le Pen]. Lazao ahy ao anaty fanehoankevitra.
Mpamaky am-polony an'i Tutuskania no namaly, tamin'ny filazàna fa maniry ny hahalala bebe kokoa ny fiantraikan'ny fandresen'ny hery havanana ao amin'ny Firaisambe Eoropeana. Na dia mbola ambany aza ireny resaka momba ny fandresean'ny hery ankavanana ao amin'ny Firaisambe Eoropeana ireny ao amin'ny RuNet dia asehon'ny Rosiana sahady ny fahalinan-dry zareo vaovao amin'ny politika Eoropeana. Amin'izao vanim-potoana vaovao isian'ny fihenjanan'ny tady amin'ny Rosia sy ny firaisambe Eoropeana izao, dia toa azo antoka ny hahitàna fa hitohy tsy hitsaha-mitombo ny fahalinan'ireo Rosiana amin'ity resaka ity ato anatin'ny volana sy taona vitsivtsy ho avy.